Ramones Logo: Sheekada Astaanta caanka ah iyo Asalka Ramones | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 11/04/2022 10:17 | Fanaaniin, General
Waxaa jira kooxo muusiko ah oo ilaashaday guulahoodii muddo dheer iyo shaqooyin dheer. Kooxda muusikadu maaha oo kaliya waxay u taagan tahay waxa ay curiso ama abuurto, laakiin sidoo kale sawirka ay u gudbiso dadka kale. Sawirku sidoo kale waa aqoonsiga calaamad ama calaamad lagu xiriirin karo shay shakhsi ah ama taariikhda kooxda ama nooca muusikada laftiisa.
Taasi waa sababta qoraalkan, waxaanu u nimid inaanu kuu soo bandhigno nooc iyo koox muusik ah oo dhagaysanaysay tobanaan sano, Ramones. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ama wax badan ka barato kooxdan caanka ah ee taariikhiga ah.
Ciyaarta aan bilowno sii.
1 ramones waa maxay
1.1.2 Sanado kadib
1.1.3 albums iyo hits
2 Taariikhda astaanta Ramones
2.3 Horumar badan iyo isbeddello
2.4 hits ugu weyn
3 Kooxaha kale ee la midka ah
3.1 Red Hot Maxjarka basbaaska
3.2 Qoryaha N'Roses
ramones waa maxay
Ramones waxaa loogu magac daray mid ka mid ah kooxaha dhagaxyada ugu caansan dhammaan taariikhda muusiga. Waxay ahaayeen raadkii calaamadeeyay, ka hor iyo ka dib, taariikhda dhagaxa 70-meeyadii. Waxay ahaayeen dhiirrigeliyeyaasha noocyada sida punk halkaas oo ay ku qasbeen dhagaxa pop, surf, bubblegum iyo noocyada kale sida dhagaxa garaashka.
Heesihiisa ayaa soo baxay oo noqday heeso ka dib markii ay curiyeen laxanno gaagaaban oo kala duwan. Kooxdan caanka ah waxay ku dhalatay oo ka soo ifbaxday xaafadaha Queens (New York), sannadkii 1974-kii, ka dib markii ay noqdeen koox ku sifoobay isku-darka laxankooda 50-meeyadii iyo 60-kii. Magaceeda gaarka ah waxaa sabab u ah odhaah aad caan u ah "Dee dee Ramone" in uu sheegay soo jeedinta Ramones iyo in uu sidoo kale si dhow ula xiriiray kooxaha kale sida Beatles.
Xubnihii ugu horreeyay ee kooxdu waxay ahaayeen gitaaristaha Johnny Ramone, bassist Dee Dee Ramone, iyo durbaanka/heesaha Joey Ramone. Waxay ku ciyaari jireen goob yar oo magaalada lagu magacaabo CBGB, halkaasoo sanado ka dib, ay noqdeen halyeeyo dhagax ah.
Guutadii Waxaa la abuuray 1974 magaalada Queens ee New York. Maalmahoodii hore, waxay ku doodeen oo ay ku soo bandhigaan dhismayaal yar yar ama goobo habeenkii ah sida baarkinka caanka ah ee CBGB. Bilowgii, kooxdu waxay ka koobnayd afar fanaan.
Kooxdu waxay gaadhay guul weyn laakiin, 22 sano ka dib, kooxdu waxay macsalaamaysay saddex ka mid ah afartii xubnood ee ka koobnaa, tan iyo saddex ka mid ah waxay dhinteen sannadihii 2001 iyo 2004. Sannado ka dib, 2014, qaybta ugu dambeysa ayaa dhiman doonta. Kaliya durbaan garaacihii ayaa ku haray, kaasoo go'aansaday inuu saxiixo oo abuuro koox cusub ka dib markii la waayay kooxda Ramones.
albums iyo hits
Kooxda ayaa duubtay wadar ahaan 14 albam istuudyahoodii, 212 heeso waxayna sameeyeen 2.263 riwaayadood. Sannadkii 2011 ama 2012, kooxdu waxay heshay Grammy-gii ugu horreeyay. Heesihiisa faraha badan, waxaa ka dhex muuqda qaar aad muhiim u ah oo muddo ka dib noqday heeso waaweyn. Waxaa ka mid ah "Blitzkrieg Bop", "KKK wuxuu qaatay ilmahayga", "Rockaway Beach", "Beat On The Brat", "Sheena Is A Punk Rocker" ama "Bonzo wuxuu aadaa Bitburg".
Isku soo wada duuboo, kooxdani waxay ilaashatay taariikh dheer oo guulo waawayn ka soo hoyatay xirfadeeda, ilaa ay ka noqoto sida ay maanta tahay.
Taariikhda astaanta Ramones
Xigasho: Indie Today
Astaanta Ramones waxay si dhab ah u noqotay calaamad maanta. Waxaan arki karnaa sida kumanaan iyo kumanaan loo iibiyay iyo kumanaan funaanado leh oo lagu daray astaantan oo weli la sii iibinayo. Oo ma aha in la filayo in bakhaar badan oo la xaaqay shaararka kuwan, tan iyo calaamadda iyo guutadu waxay ilaalinayaan fariinta, taas oo kaliya naqshadeeyaha iyo ay yaqaaniin.
Source: music lover eye
Abuuraha astaanta, wuxuu ahaa Arturo Vega Mexican, naqshadeeye iyo farshaxan aad loogu soo bandhigay kooxda Ramones, maadaama ay ahayd saaxiibtinimo buuxda oo ka mid ah qaybaha qaar ka mid ah kooxda. Shaki la'aan, wuxuu ahaa abuurihii iyo kii go'aansaday in la mideeyo sawirka gorgorka oo leh magacyo kala duwan oo xubnaha kooxda ah. Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro sawir isku dayay in uu matalo qiyamka kooxdu dadweynaha, oo ku filan in ay ka soocaan kooxda inteeda kale.
Sawirka Gorgorku waa asal ahaan Meksiko iyo waxaa waxyoonay gorgorka calanka Mexico. Fikirkani wuxuu ka dhashay sawir uu naqshadeeyaha ka soo muuqday suun leh gorgor la sheegay iyo funaanad fallaadho leh oo uu sidoo kale naqshadeeyay.
Astaanta ayaa la dhammeeyay dhaqan galkeeda ka dib safarkii ay kooxdu ku tagtay Washington. Kadib markii uu yimid guriga cad, naqshadeeyuhu wuxuu helay dhiirigelin cusub oo loogu talagalay naqshadeynta astaanta, mar haddii ay ka dhalatay dhowr shaabbadood oo lagu dhex geliyey calanka Maraykanka laftiisa.
Sababtaas awgeed, wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo astaanta waaxda gobolka. Later waxa ay ku jirtay tafaasiil yar yar oo kale, sida fiidmeerta baseball, laurel caanka ah ama laamaha geed tufaax.
Horumar badan iyo isbeddello
Muddo ka dib, naqshadeeyuhu wuxuu go'aansaday inuu beddelo faahfaahinta sida laurel caanka ah ee naqshadaha qaarkood ee shaadhka. Falaaraha madaxa iyo laabta shimbirka ayaa lagu daray ka dib dhiirigelinta uu ka helay abuurista shaadhka. Waxa uu sidoo kale bedelay qaar ka mid ah hal-ku-dhegyada ama weedhaha rasmiga ah ee kooxda, tusaale ahaan waxa uu soo bandhigay odhaahda caanka ah ee “Hey Ho Aan Tagno”.
hits ugu weyn
Ka dib markii la sameeyay astaanta, waxay heshay muuqaalkeedii ugu horreeyay ee albaabka ka tag guriga. Calaamadda caanka ah waxay noqotay mid laga aqoonsaday adduunka oo dhan, si ay u noqoto mid ka badan astaanta qaranka marka loo eego kaliya astaanta kooxda muusikada. Waxaa■Taageerayaasha Ramones waxay bilaabeen inay iibsadaan qaar ka mid ah funaanadaha ay summada la galisay, si aad u badan, ilaa maantadan la joogo, waxay ku sii socdaan iibsashada iyo iibinta dukaamada dhagaxyada qaarkood.
Shaki la'aan, wax kasta oo ka yimid abuurista astaanta waxay ahaayeen guulo waaweyn oo tiro badan. Si aad u badan, in Ramones wali waa mid ka mid ah kooxaha dhageysiga ugu badan ee codsiyada sida Spotify. Waa wax cajiib ah in laga fikiro, ka dib sannado badan oo khasaare ah, kooxdu waxay sii wadaa inay u noolaato dhammaan kuwa dhegaysanaya iyaga maalin kasta. yaab dhamaystiran.
Kooxaha kale ee la midka ah
Red Hot Maxjarka basbaaska
Koox kale oo sidoo kale u taagan guulaheeda waa Red Hot. Kooxda oo lagu sameeyay 1983 magaalada Los Angeles, California, waxay sidoo kale qayb ka ahayd taariikhda dhagaxa adduunka oo dhan. Muusiggoodii iyo hibodoodii waxa ay gaadheen meel kasta oo adduunka ka mid ah, taas oo la macno ah in ay iyaguna sameeyeen taariikh.. Dhammaan heesahooda waa la wada yaqaan, laakiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah "Californication", "Dhinac kale" iyo "Ma Joojin Karo".". Marka la soo koobo, waa koox gudbisa dareenka wanaagsan iyo tamarta wanaagsan.
Waa koox dhagxaan ah oo laga sameeyay magaalada u dhow Hollywood, ku dhawaad ​​​​u dhow Santa Monica, ee Los Angeles 1985. Waa mid ka mid ah guutooyinka dhagxaanta ee ugu guulaha badan adduunka, si aad ah, in ay u safreen adduunka oo dhan sida muusigooda oo kale.. Qiyaastii in ka badan boqol iyo konton milyan oo rikoodh ayaa la iibiyay, cadho dhab ah haddii aan ka hadalno hits iyo lambarada. Qaar ka mid ah heesaha iyaga ka soo jeeda waxaa ka mid ah "Sweet Child O'Mine", "ku soo dhawaada kaynta" ama "Roobka Noofambar". Shaqooyin farshaxan oo dhab ah oo ku raaci kara meel kasta.
Haddii aan muujino mid kale oo ka mid ah halyeeyada weyn ee dhagaxa ama birta culus, waxay shaki la'aan noqon doontaa KISS. Kooxdan waxaa lagu abuuray magaalada New York bishii Janaayo 1973. Waa koox aan kaliya u istaagin heesahooda iyo hits, laakiin sidoo kale ee labbiskooda iyo isqurxintooda mar kasta oo ay masraxa soo boodaan. Kooxdu waxay bilawday horumarkeedii wacnaa qiyaastii 1960-kii, markaasoo ay aqoonsadeen dhegaystayaal aad u tiro badan. Heesihiisa ugu caansan waxaa ka mid ah "I was made for lovin' you", "Jannada Dabka" iyo "I Love it Loud".
Albaabada waxay ahaayeen koox kale oo ka mid ah kooxaha dhagaxa dhagaxa ah ama indie rock kuwaas oo garaacay albaabka guusha iyo caanka. Waxaa lagu sameeyay magaalada Los Angeles, ee New York 1965kii. Waxay ahayd mid ka mid ah kooxihii sii waday xirfad gaaban laakiin aad u daran, oo ay ku raran yihiin guulo badan oo adduunka ah. Waxay qayb ka ahaayeen kooxo kale oo badan oo dhagaxyo ah oo 70-meeyadii iyo 80aadkii waxayna wadaageen qaar ka mid ah marxaladaha ugu wanaagsan. Heesihiisa ugu caansan waxaa ka mid ah "Riders on the duufaanka" ama "i taabo". Shaki la'aan, laba heesood oo aan la ilaawin.
Waanu iska eryi kari waynay qoraalkan, anagoon marka hore xusin boqorka jibbaarada ah ee boqorada. Kooxda caanka ah ee Ingiriisidu waxay gaadheen guulo waaweyn oo aanay koox kale gaadhin muddadii ay fanka ku jireen. Si aad u badan, oo ay ku guuleysteen in ay buuxiyaan kumanaan iyo kumanaan garoon. Kooxda uu hogaamiyo Freddy Mercury, ayaa isla markiiba fayras galay waxaana intaa dheer, waxay taageerayaashooda la wadaageen guulo waaweyn heeso sidan oo kale ah: "Waxaan nahay Champions League", "Bohemian Rapshody", "Waxaan rabaa inaan xoreeyo" iwm. Liis dheer oo mawduucyo waaweyn ah oo u suurtagashay in ay buuxiyaan maskaxda qof kasta oo naga mid ah taariikhda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Ramones logo